सांसद लम्सालसँग धुलिखेलबासीले भने ‘पुराना बजारको पहिचान जोगाइ राख्न पहल गरिदिनु पर्यो’ – मिलिजुली खबर
सांसद लम्सालसँग धुलिखेलबासीले भने ‘पुराना बजारको पहिचान जोगाइ राख्न पहल गरिदिनु पर्यो’
काभ्रेको धुलिखेल नगरपलिकाभित्रको नेवारी बस्तीको पहिचान जोगाउन बागमती प्रदेश सभाका सांसद लक्ष्मण लम्सालसँग स्थानीय जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् ।
नागरिक संवाद कार्यक्रममा सहभागि वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष संजय कोजुले सांसद लम्सालाई वडामा हालसम्म पारेको बजेटका लागि विशेष धन्यवाद दिनुभयो । साथै उहाँले नेवारी बस्ती रहेका पुराना बजार जोगाउनका लागि पहलकदमी गरिदिन आग्रह समेत गर्नुभयो ।
‘सबैभन्दा पहिलो त म सांसद लक्ष्मण लम्साललाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । उहाँको पहलमा मेरो वडामा राम्रै बजेट परेको छ । धुलिखेल पर्यटकीय नगर भनेर भाषणमा धेरैले भनेका छन् । तर भाषणमा मात्रै सीमित भइरहेको छ । म सांसद लम्साललाई के आग्रह गर्न चाहान्छु भने हाम्रा पुरानो बजारको संरक्षण गर्न पहल गरिदिनु पर्यो । केहि न केहि बजेट राखिदिनुस् ।
हाम्रो पुराना बजारहरु सबै नयाँ प्राविधिको घरहरुमा रुपान्तरण हुँदै छ । अब हामीले पर्यटकलाई के देखाउँने ? श्रीखण्डपुरले के देखाउने ? शंखुले के देखाउने ? धुलिखेल नगरपालिकाको पुरानो बजार, श्रीखण्डपुर र शंखु नेवारी बस्ती भएको बजार हो ।
हाम्रो पुर्खाहरुले जोगाई राखेको यो ठाउँ । हामै पुस्ताले हाम्रो पहिचान भेटाउँदैछौँ । बजारको स्वरुपमा धेरै परिवर्तन आएको छ । यहाँको पहिचान नै हराउने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसको लागि तपाई यहि क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको सांसद पहल गरिदिनु पर्यो । वडाध्यक्ष कोजुले भन्नुभयो ।’
सांसद लम्सालले वडाध्यक्ष कोजुको प्रस्तावलाई गम्भीरता पुर्वक लिँदै भन्नुभयो ‘वडाध्यक्ष ज्यूको प्रस्ताव निकै समय सापेक्षा छ । तर तपाईहरुलाई म प्रष्टसँग भन्न चाहान्छु । ठोस प्रस्ताव मलाई दिनुस् । म मेरै कार्यकालमा केहि न केहि सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहान्छु ।
किन भने हामीले हाम्रो संस्कृति र पहिचानलाई कहिल्यै मेटाउन हुँदैन । ठूल, ठूला घर मात्रै हाम्रा विकासको मापन होइन् । हामीले हाम्रो पहिचानलाई जोगाई राख्नु पर्छ । तर पुराना बजारको पनि कुन चाँहि क्षेत्र बढी संरक्षण गर्नु पर्ने हो । त्यो तपाईहरुले मलाई भनिदिनु पर्यो । पुराना बजार भन्न साथ हामीलाई पोखरी, इनार, पुराना ढुंगे धारा, चौतारा, मठ मन्दिर, सिँढी, पुराना गोरेटो बाटो, पाटीपौवा, कलात्मक झ्याल ढोका राखिएका घरका सम्झना आउँछ ।
अहिले यी चीज निकै कम मात्रामा देख्न पाइन्छ । बजारभित्रको कुनै निश्चित संरचना संरक्षण गर्न हो वा समग्र बजारको पुर्वाधारका लागि हो । तपाईहरुले विस्तृत खाका दिनुस् । यस्तो कुरामा ढिलाई गर्न हुँदैन् । म आफुले सक्ने जति सबै प्रयत्न गर्नेछु । सांसद लम्सालले भन्नुभयो ।’